China Digital Micro Melting Point စက်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Jiahang Instruments
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အရည်ပျော်မှတ်မီတာ > အသေးစားအရည်ပျော်မှတ်မီတာ > Digital Micro Melting Point Apparatus သည်
JHX-4 Digital Micro Melting Point Apparatus သည်အသုံးပြုသူများအားတိကျ၊ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစမ်းသပ်မှုရလဒ်များပေးရုံသာမကသုံးစွဲသူများအားထိရောက်အဆင်ပြေစေသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပေးနိုင်ရန်သာမက၊ အတွေ့အကြုံ။ optical မှန်ဘီလူးချဲ့နည်းပညာသည်နမူနာအရည်ပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုလွယ်ကူရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သည်။
TheJHX-4Digital Micro Melting Point Apparatus သည်အသုံးပြုသူများအားတိကျ၊ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစမ်းသပ်မှုရလဒ်များပေးရုံသာမကသုံးစွဲသူများအားထိရောက်အဆင်ပြေစေသောစမ်းသပ်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးစွမ်းသည်။ optical မှန်ဘီလူးချဲ့နည်းပညာသည်နမူနာအရည်ပျော်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးကိုလွယ်ကူရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သည်။
1. Digital Micro Melting Point Apparatus သည် Introduction
၁: တစ်ကြိမ်တွင်နမူနာ ၃ ခုထုတ်ယူပါ။
3: အပူနှုန်း (0.1-10) ° C/min ကိုထင်သလိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
2. Digital Micro Melting Point Apparatus သည် Parameter
အခန်းအပူချိန် -၃၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
± ၀.၄â„ ƒ (<၂၅၀â„ ƒ)
± ၀.၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (> ၂၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)
အရည်ပျော်မှတ်ထပ်ရနိုင်သော0.1â„ ƒ/Min ±0.3â„ ƒ
TFT high-definition မှန်အရောင်မျက်နှာပြင်
ဒေတာ interface ကို:
အပြင်အချင်း† mm ၁.၆ မီလီမီတာ၊ အတွင်းအချင်းÏ† ၁.၂ မီလီမီတာ
၂၅၀ မီလီမီတာ*၂၅၀ မီလီမီတာ*၁၅၀ မီလီမီတာ
အရည်ပျော်မှတ်ယန္တရားသည်ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနတွင်အရေးပါသောနေရာမှရှိနေသည်။ ၎င်းသည်အစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ နံ့သာမျိုး၊ ဆိုးဆေးနှင့်အခြားအော်ဂဲနစ်အရည်ကြည်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Digital Micro Melting Point Apparatus တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပူပေးစနစ်ရှိပြီးတည်ငြိမ်သောအပူနှုန်းကိုသေချာပေးနိုင်သည်။ ပလက်တီနမ်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာသည်မာကျူရီသာမိုမီတာသုံးသောရိုးရာနည်းလမ်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြန်တုံ့ပြန်မှုနှင့်မြင့်မားတိကျမှု၏အားသာချက်များရှိသည်။
၅။ ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု
မေး။ ။ မင်းရဲ့ကုမ္ပဏီက Digital Micro Melting Point Apparatus ကိုလုပ်လာတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ။
hot Tags:: Digital Micro Melting Point စက်၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ၊ စျေးပေါ၊ အဆင့်မြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စျေး၊ CE
Micro Melting Point Apparatus ဖြစ်သည်
Micro Melting Point Tester ကိုအသုံးပြုသည်
Micro Melting Point တူရိယာ